လက္ေတာ့ပ္/ ဖုန္း ရဲ႕ ဘက္ထရီကို သက္တမ္းၾကာၾကာခံေစခ်င္ရင္
လက္ေတာ့ပ္/ ဖုန္း ရဲ႕ ဘက္ထရီကို သက္တမ္းၾကာၾကာခံေစခ်င္ရင္ ဒီအခ်က္ေတြ သိထားဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။
လက္ေတာ့ပ္/ ဖုန္းေတြရဲ႕ အသက္က ဘက္ထရီပါပဲ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဘက္ထရီကို သက္တမ္းၾကာၾကာနဲ႔ အားခံေအာင္ ဘယ္လိုအသုံးျပဳသင့္သလဲ။ ေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္ေလးေတြ ေလ့လာမိသေလာက္မွ်ေဝေပးလိုက္ပါတယ္။
၁။ အားအလြန္အကၽြံသြင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ညလုံးေပါက္သြင္းျခင္း
မ်ားေသာအားျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကဖုန္းကို ညအိပ္ယာဝင္ခ်ိန္အသုံးျပဳတာမ်ားပါတယ္။ အသုံးျပဳရင္လည္း အားကုိအကုန္သုံးတာမ်ိဳး ဒါမွမဟုတ္ အားသြင္းရင္သုံးတာမ်ိဳး ျပဳလုပ္ေလ့ရွိပါတယ္။ အိပ္ခ်င္လာတဲ့အခ်ိန္ၾကမွ ဖုန္းကိုလက္ကခ်ၿပီး အားကို တစ္ညလုံးသြင္းထားလုိက္ၾကပါတယ္။အဆင့္ျမင့္နည္းပညာနဲ႔ေပါင္းစပ္တီထြင္ထားတဲ့ ဘက္ထရီေတြကေတာ့ အားျပည့္သြားတဲ့အခါ အလိုအေလ်ာက္အားသြင္းခ်င္းကို ရပ္တန္႔ေပးႏိုင္တဲ့ ထိန္းခ်ဳပ္မႈစနစ္ပါဝင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီလိုနည္းပညာပါဝင္တဲ့ ဘက္ထရီဆိုတာ ၁၀၀% မွာ ၃၀% ေလာက္ပဲရွိပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ဖုန္းကိုညလုံးေပါက္ အားအလြန္အကၽြံသြင္းျခင္းေၾကာင့္ အပူလြန္ကဲၿပီး ေပါက္ကြဲလြယ္ပါတယ္။ မေပါက္ကြဲရင္ေတာင္မွ ၾကာလာတဲ့အခါ ဖုန္းအားသက္တမ္းက သတ္မွတ္ထားတာထက္ၾကာၾကာခံႏုိုင္မွာမဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။
၂။ ဖုန္းအားကိုဘယ္ေလာက္ % ထိအသုံးျပဳသင့္သလဲ။
ဖုန္းအားကို သုံးခ်င္တဲ့အခ်ိန္က်ေတာ့ အကုန္သုံးၿပီး အားသြင္းခ်င္တဲ့ အခ်ိန္ဆို ၉၀% ေလာက္ရွိလည္း အားသြင္းျခင္းကို ျပဳလုပ္ေလ့ရွိပါတယ္။ ဒါက သင့္ဖုန္းဘက္ထရီသက္တမ္းကို ၾကာၾကာမခံေစပါဘူး။ ကၽြမ္းက်င္သူေတြရဲ႕အဆိုအရ ဖုန္းအားကို ၄၀% မွ ၈၀% ဝန္းက်င္အထိ အားသြင္းျခင္း၊ အသုံးျပဳျခင္းက သင့္ဖုန္းဘက္ထရီသက္တမ္းကို ၾကာ႐ွည္ခံေစပါတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။
၃။ အားသြင္းၿပီးလည္း အားသြင္းႀကိဳးကို ပလပ္ေပါက္မွာတပ္ထားျခင္း
ဖုန္း/လက္ေတာ့ပ္အားသြင္းႀကိဳးကို မလိုအပ္ဘဲ ပလပ္ေပါက္မွာ တပ္ထားျခင္းက ေကာင္းတဲ့ အႀကံေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔အသုံးျပဳေနတဲ့ လွ်ပ္စစ္မီးအားက အတက္အက် တည္ၿငိမ္မႈမရွိတာေၾကာင့္ သင္အားသြင္ႀကိဳးကို အားမသြင္းဘဲ အၿမဲတမ္း ပလပ္ေပါက္မွာ ထိုးထားမယ္ဆိုရင္ သင့္ဖုန္း/ လက္ေတာ့ပ္ ဘက္ထရီကိုၾကာရွည္ခံမွာမဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ အားသြင္းၿပီးတဲ့အခါ အားသြင္းႀကိဳးကို ပလပ္ေပါက္ေနျဖဳတ္ထားသင့္ပါတယ္။
၄။ ေတြ႕ကရာအားသြင္းႀကိဳးကို အသုံးျပဳျခင္း
ဖုန္းတစ္လုံးနဲ႔တစ္လုံး အသုံးျပဳထားတဲ့ဘက္ထရီ mAh ခ်င္းမတူညီတာေၾကာင့္ အားသြင္းတဲ့ Adaptor ခ်င္းလဲ မတူညီႏိုင္ပါဘူး။ ဒါကို သင္က ေတြ႕ကရာအားသြင္းႀကိဳးနဲ႔ ဖုန္းကိုအားသြင္းျခင္း၊ Computer ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္အားသြင္းျခင္း စတဲ့ အျပဳအမူေတြက ဖုန္းဘက္ထရီသက္တမ္းကိုၾကာရွည္မခံေစတဲ့အျပင္ ဘက္ထရီအားလည္း အကုန္ျမန္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဖုန္းကို Original အားသြင္းႀကိဳးနဲ႔သာ အားသြင္းတာက ပိုၿပီးအဆင္ေျပေစပါတယ္။
လက်တော့ပ်/ ဖုန်း ရဲ့ ဘက်ထရီကို သက်တမ်းကြာကြာခံစေချင်ရင် ဒီအချက်တွေ သိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
လက်တော့ပ်/ ဖုန်းတွေရဲ့ အသက်က ဘက်ထရီပါပဲ။ ဒါ့ကြောင့် ဘက်ထရီကို သက်တမ်းကြာကြာနဲ့ အားခံအောင် ဘယ်လိုအသုံးပြုသင့်သလဲ။ ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်လေးတွေ လေ့လာမိသလောက်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
၁။ အားအလွန်အကျွံသွင်းခြင်း သို့မဟုတ် ညလုံးပေါက်သွင်းခြင်း
များသောအားဖြင့် ကျွန်တော်တို့ကဖုန်းကို ညအိပ်ယာဝင်ချိန်အသုံးပြုတာများပါတယ်။ အသုံးပြုရင်လည်း အားကိုအကုန်သုံးတာမျိုး ဒါမှမဟုတ် အားသွင်းရင်သုံးတာမျိုး ပြုလုပ်လေ့ရှိပါတယ်။ အိပ်ချင်လာတဲ့အချိန်ကြမှ ဖုန်းကိုလက်ကချပြီး အားကို တစ်ညလုံးသွင်းထားလိုက်ကြပါတယ်။အဆင့်မြင့်နည်းပညာနဲ့ပေါင်းစပ်တီထွင်ထားတဲ့ ဘက်ထရီတွေကတော့ အားပြည့်သွားတဲ့အခါ အလိုအလျောက်အားသွင်းချင်းကို ရပ်တန့်ပေးနိုင်တဲ့ ထိန်းချုပ်မှုစနစ်ပါဝင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီလိုနည်းပညာပါဝင်တဲ့ ဘက်ထရီဆိုတာ ၁၀၀% မှာ ၃၀% လောက်ပဲရှိပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်ဖုန်းကိုညလုံးပေါက် အားအလွန်အကျွံသွင်းခြင်းကြောင့် အပူလွန်ကဲပြီး ပေါက်ကွဲလွယ်ပါတယ်။ မပေါက်ကွဲရင်တောင်မှ ကြာလာတဲ့အခါ ဖုန်းအားသက်တမ်းက သတ်မှတ်ထားတာထက်ကြာကြာခံနိုုင်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။
၂။ ဖုန်းအားကိုဘယ်လောက် % ထိအသုံးပြုသင့်သလဲ။
ဖုန်းအားကို သုံးချင်တဲ့အချိန်ကျတော့ အကုန်သုံးပြီး အားသွင်းချင်တဲ့ အချိန်ဆို ၉၀% လောက်ရှိလည်း အားသွင်းခြင်းကို ပြုလုပ်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒါက သင့်ဖုန်းဘက်ထရီသက်တမ်းကို ကြာကြာမခံစေပါဘူး။ ကျွမ်းကျင်သူတွေရဲ့အဆိုအရ ဖုန်းအားကို ၄၀% မှ ၈၀% ဝန်းကျင်အထိ အားသွင်းခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်းက သင့်ဖုန်းဘက်ထရီသက်တမ်းကို ကြာရှည်ခံစေပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
၃။ အားသွင်းပြီးလည်း အားသွင်းကြိုးကို ပလပ်ပေါက်မှာတပ်ထားခြင်း
ဖုန်း/လက်တော့ပ်အားသွင်းကြိုးကို မလိုအပ်ဘဲ ပလပ်ပေါက်မှာ တပ်ထားခြင်းက ကောင်းတဲ့ အကြံတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုနေတဲ့ လျှပ်စစ်မီးအားက အတက်အကျ တည်ငြိမ်မှုမရှိတာကြောင့် သင်အားသွင်ကြိုးကို အားမသွင်းဘဲ အမြဲတမ်း ပလပ်ပေါက်မှာ ထိုးထားမယ်ဆိုရင် သင့်ဖုန်း/ လက်တော့ပ် ဘက်ထရီကိုကြာရှည်ခံမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် အားသွင်းပြီးတဲ့အခါ အားသွင်းကြိုးကို ပလပ်ပေါက်နေဖြုတ်ထားသင့်ပါတယ်။
၄။ တွေ့ကရာအားသွင်းကြိုးကို အသုံးပြုခြင်း
ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံး အသုံးပြုထားတဲ့ဘက်ထရီ mAh ချင်းမတူညီတာကြောင့် အားသွင်းတဲ့ Adaptor ချင်းလဲ မတူညီနိုင်ပါဘူး။ ဒါကို သင်က တွေ့ကရာအားသွင်းကြိုးနဲ့ ဖုန်းကိုအားသွင်းခြင်း၊ Computer ဖြင့် ချိတ်ဆက်အားသွင်းခြင်း စတဲ့ အပြုအမူတွေက ဖုန်းဘက်ထရီသက်တမ်းကိုကြာရှည်မခံစေတဲ့အပြင် ဘက်ထရီအားလည်း အကုန်မြန်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဖုန်းကို Original အားသွင်းကြိုးနဲ့သာ အားသွင်းတာက ပိုပြီးအဆင်ပြေစေပါတယ်။
လူသားအားလုံးအိပ်မက်မက်နေမယ့် iPhone 12 ကို ကမ္ဘာကြီးထံမိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပြီ
Better than, than any other smartphones ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေနဲ့အတူ iPhone 12 ကို မနေ့ညကပဲ မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ iPhone ရဲ့မျိုးဆက်သစ်တွေ ထွက်ပေါ်လာတိုင်း အားလုံးက ဘယ်လိုအသစ်အဆန်းတွေ၊ ဘယ်လိုမျိုး unique ဖြစ်တာတွေ...
Xiaomi က Apple ရဲ့ Feature တွေကို ပေါ်တင်ကူးချခဲ့တာတောင် Apple က ဘာကြောင့်တရားမစွဲခဲ့တာလဲ???
Xiaomi ကတော့ အဆင့်အတန်းမြင့်တဲ့ဖုန်းတွေကို တန်လွန်းမကတန်လွန်းတဲ့စျေးနဲ့အတူ စမတ်ဖုန်းလောကကို ထိုးဖောက်ခဲ့ပြီး တရုတ်နိုင်ငံအပြင် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှာပါ ပရိသတ်အခိုင်အမာ ရယူထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Xiaomi အနေနဲ့ Apple ထုတ် iPhone တွေမှာပါတဲ့ Feature တွေကို မကြာခဏ...
Video & Music အတွက် အကောင်းဆုံး Android App (၆) ခု
၂၀၂၀ မှာဆိုရင် ခေတ်မီစမတ်ဖုန်းတွေအတွက် software အသစ်တွေရဲ့ အားသာချက်တွေကြောင့် Android App တွေကလည်း ပိုမိုအားကောင်းလာပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ချို့ဟာ လုံးဝအခမဲ့တွေရှိနေပါတယ်။ တစ်ချို့အက်ပလီကေးရှင်းတွေကတော့ premium ကြေးတွေပေးသွင်းပြီးမှသာ အသုံးပြုခွင့်ရှိပါတယ်။ ဒီကနေ့မှာတော့ Stay...
ကျွန်မတို့ရဲ့ဖုန်းတွေကို ဘာကြောင့် နှိုးစက်နာရီ(Alarm Clock) အဖြစ် မသုံးသင့်တာလဲ?
ဒီနေ့ခေတ်မှာ ကျွန်မတို့ရဲ့ ဖုန်းတွေဟာ ကျွန်မတို့ရဲ့ လက်ခွဲပစ္စည်းတစ်ခုလိုဖြစ်လာနေပါတယ်။ ကျွန်မတို့ဟာ အလုပ်လျှောက်ဖို့၊ သတင်းအချက်အလက်တွေရှာဖွေဖို့ နှင့် နောက်ဆုံးနေအိမ်တွေရှာဖွေဖို့အထိ ၎င်းကို အသုံးပြုလာကြပါတယ်။ တကယ်လို့ ကျွန်မတို့ရဲ့ ဖုန်းတွေသာ မတော်တဆတစ်ခုခုကြောင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရရင် ဘဝကြီးဟာ ရပ်တန့်သွားသလိုပါပဲ။ ပြီးတော့...